Madaxweyne Farmaajo oo codsaday in la joojiyo dagaalka u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweyne Farmaajo oo codsaday in la joojiyo dagaalka u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. [Sawirka]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa codsaday in la joojiyo dagaalka u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland, sida lagu sheegay bayaan.
“Waa in dagaalka Tuka-raq si degdeg ah oo shuruud la’aan ah lagu joojiyaa, wax walbana loo maraa dariiqa wadahadalka.” Ayuu bayaan ku yiri Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa maanta oo Talaado ah ka qarxay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool, halkaas oo tan iyo bishii Janaayo ay isku hor fadhiyeen.
Madaxweyne Cabdiweli oo sheegay in dhulkooda ay difaacan doonaan
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada amaanka dowlada federaalka ee Soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho waxa ay ku qabteen diyaarad raashin dhacay u waday gobolka Gedo ee Soomaaliya, sida ay ku warantay wakalaada wararka dowlada Soomaaliya. Madaxa [...]
Madaxweyne Farmaajo oo u safray Qatar
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Axad u ambabaxay dalka Qatar, sida ay sheegeen masuuliyiin katirsan madaxtooyada. Masuuliyiin katirsan Villa Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in Madaxweynuhu uu labo maalmood oo safar [...]